Waini inotonhorera Vagadziri - China Waini inotonhorera vatengesi & Fekitori
Waini yepurasitiki inotonhorera mabhegi echando ruoko rwehombodo dzewaini
Inoshanda zvakanyanya: dhizaini yekubata champagne, chena waini, rose waini, doro uye zvimwe zvinwiwa, yakanakira pati, pikiniki, BBQ, kupemberera, kupisa mumba uye zvimwe zviitiko zvekunze.
Isa iyo champagne bhodhoro chiller mufiriji kwemaawa angangoita maviri, uye tsvedza pane ruoko kuti utonhore zvinwiwa nekukurumidza uye uzvichengetedze zvakanyatsotonhora kwemaawa. Yakakwana kushandisa pawaini, doro, Champaign, nezvimwe.
Nguva Yekuenzaniso: 3-10days, ndokumbira utumire email yemuenzaniso wekutumira mutengo wekubhadhara.
Production: Mazuva 15-20 mushure mharidzo mvumo.